Avy any “Bira” sy “Tsi/didy”… : hoentina eto an-dRenivohitra ny “Hitady azy S” | NewsMada
Avy any “Bira” sy “Tsi/didy”… : hoentina eto an-dRenivohitra ny “Hitady azy S”
Hanamarika ny fiverenan’ireo hetsika ara-javakanto samihafa, ao amin’ny Cercle germano-malagasy (CGM) etsy Analakely, ny seho mitondra ny lohateny hoe “Hitady azy S”. Tafiditra ao anatin’ireo hetsika fanaon’ny Faribolana Sandratra, isam-bolana, ity tsangan-tononkalo, hatao ny 1 novambra tolakandro, ity.
Hanakoako, mandritra izany, ny sanganasan’i Liantsoa, Vatoary, Kalo Fanomezana ary Narilala. “Hiavaka, tsy toy ireo antsa sy tsangan-tononkalo hita sy niseho hatramin’izay izy ity, noho izy hilalaovana zavakanto maro, ankoatra ny soratra, toy ny dihy, sary hosodoko, beko, sns. Izany hoe, hokitihina ao avokoa rehefa mety ho kanto”, hoy ny fanazavan’i Kalo Fanomezana. Hizara ny talentany koa àry ry Rengita, Volahasiniaina, Andry T ary Ravaka.
“Hitady azy“, fehezanteny entina hamehezana ireo karazam-pameloman-tenan’ny olona eo amin’ny fiainany andavanandro, mifamatotra amin’ny fitadiavam-bola, matetika. Efa nentin’ny ekipan’ny Faribolana Sandratra tany Antsirabe izy ity ary natao hoe “Hitady azy “B“” ny lohahevitra tamin’izay. Avy eo, nentina tany Tsiroanomandidy ary nantsoina hoe “Hitady azy D”. Ankehitriny, ho eto an-tanàna izy ary natao hoe “Hitady azy S“. Misy heviny maro io “S” io, toy ny hoe “spécial”, amin’ny maha seho tokana azy. Azo atao koa hoe “seho”, “sary”, sns, araka ny fanazavan’i Kalo Fanomezana hatrany. Ny 1 novambra izao àry ny fotoana ho an’ireo liana te hamantatra izay tadiaviny.